Daboolka Wareegga, Khatimidii kuleylka ee kuleylka, Qalabka Khatimidda - Baakadaha Baakadaha
Lagu daabacay astaamo gaar ah ama hal ku dhigyo
Waxaa si qoto dheer ula dhacay sumado gaar ah.
Ku habboon codsiyada kala duwan.
312020 / Oktoobar
Faa'iidooyinka dalabka aluminium gaaska
Faa'iidooyinka Codsiga ee Aluminium Aluminium Aluminium gaas aluminium ah ayaa laga sameeyay aluminium ka dib markii la riixo ka dibna loo sameeyo ujeedooyin kala duwan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha baakadaha qaarkood si loo go'doomiyo hawada loona kordhiyo s ...
Suuqa Kala Bixinta Kuleylka kuleylka si loo Heysto Awood Sare oo Kobaca
Suuqa Kala Bixinta Kuleylka Kuleylka Si Loo Heysto Awood Aad U Weyn Oo Loogu Talagalay Kobcinta Baakadaha wax soo saarka ayaa markhaati ka noqday koror la yaab leh dhowrkii sano ee la soo dhaafay sababtoo ah isticmaalka sii kordhaya ee badeecadaha baakadeysan ee adduunka. Malaayiin badeecada ah ...
292020 / Sebt
White Gaskets Polyethylene xumbo gaskets
White Gas -ets Polyethylene xumbo gaskets xiran unugyada iskutallaabta xiran polyetylen xumbo had iyo jeer waxay noqon kartaa mid ka mid ah waxyaabaha goomayaasha xumbo ugu fiican. Xumbo polyetylenku waxay leedahay laba qaybood oo waaweyn - kiimiko iskutallaabaysan oo xumbada polyetylen ah ...